China Carbopol 980 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Imichiza yemihla ngemihla yeBakala leCarbomer
Imichiza yemihla ngemihla yeBanga lePolyethylene Glycol
Ukusingqongileyo okusasazekayo ngeRubber
Ummeli weRabha yangaphakathi yokuKhutshwa kweArhente
Amayeza eBakala lePolyethylene Glycol
Amayeza eBakala Carbopol
ICarbomer 980 Carbopol 980 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo, ipolishwe kwinkqubo yokudibanisa i-ethyl acetate kunye necyclohexane. Iyakwazi ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngedosi ephantsi. Ukuhamba kwayo okufutshane (ukungasebenzisi-drip) iipropathi kufanelekile kwizicelo ezinje ngeegel ezicacileyo, iigels ezinotywala, iikhrimu. Xa ingathathi hlangothi ngealkali yenza amanzi aqaqambileyo okanye iigels ezinotywala kunye neekhrim.
Iimpawu kunye neNzuzo
Iipropathi zokuhamba okufutshane
Ukumiswa okuphezulu, ukuqina kunye nokuzinzisa amandla
Iinwele zokuthambisa iinwele
Iigel zamanzi ezinxilisayo
Isithambiso sesandla, umzimba nobuso
Uhlobo olucetyiswayo lwe-0.2 ~ 1.0 wt%.
Ukusasaza iCarbomer940 ngokupheleleyo, kufanele ukuba icothwe kancinci kwaye ngononophelo ukusasazwa phakathi ngelixa umxube unyanzeliswa ngokukhawuleza ukunqanda ukwenziwa kwamaqhuma; Umxhubi wezinga eliphezulu kakhulu lokucheba kufuneka aqeshwe ngononophelo ukuthintela ukulahleka kwe-viscosity.
I-viscosity efanelekileyo inokufezekiswa kumanqanaba e-pH ayi-5.0 ~ 10.0 xa ingathathi cala; Kwinkqubo ye-hydoalcoholic system, i-neutralizer echanekileyo kufuneka ikhethwe ngononophelo ngokusekwe kubungakanani botywala obufanele ukuba bujijiswe.
Emva kokungathathi hlangothi, ukucheba okuphezulu kunye nokunyusa okuhlala kufanelekile kufuneka kuthintelwe ukugcina amandla okuqina okuzinzileyo.
I-Hydrophilic thickener, i-emulsifier ezinzileyo, iarhente yokunqumamisa kunye nejeli zinokubonakala okuhle. Kuyimfuneko ukugcina ukumodareyitha ukuya kubuthathaka obubi ukuze ube nokungaguquguquki. Ngoko ke, akunakwenzeka ukuhlala kunye ne-asidi esebenzayo. Ukongeza, uCarbomer woyika neetyiwa. Ke ngoko, ii-ion ze-amaminerali azinakongezwa, ngaphandle koko ukungqinelana kuya kunyamalala kunye nokucaphukisa kwimbonakalo yamehlo. Kwipolymer, kukhulu inani loqhagamshelo (umz. Carbomer 940), iba nkulu imolekyuli yepolymer. ICarbopol ligama elinikwe ngumenzi wecandelo, uninzi lwazo lubaliwe iCarbomer, kodwa ayizizo zonke. [iyacaphukisa, akukho mabala]
Indlela yokupakisha: 20kg Carton
Ubomi beShelf: iinyanga ezingama-24
Ngokuphawula: Inkampani yethu ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeCarbopol.
Egqithileyo ICarbopol 941
Okulandelayo: ICarbopol 981
Polyethylene Glycol 8000 Peg 8000
Inombolo yomnxeba: 086-0532-66569009